Uhlelo – Windows – Vessoft
I-7-Zip – isoftware icindezela amafayela futhi isebenzisa izindlela ezikhiqiza kakhulu zokucindezela ukufeza umphumela omuhle kakhulu.
I-Classic Shell – isoftware yomklamo wakudala wemenyu yeWindows. Futhi, i-software isekela inani elikhulu lamathuluzi angeziwe wokunika amandla imenyu.
Isofthiwe ukuhlanza ebhukwini uhlelo aphume udoti ifayela. Isofthiwe kuthola izicelo ngoba wawungekho kwi drive kanzima futhi likuvumela ukususa okhiye zabo kusukela ebhukwini.
I-AdvancedCare Advanced – ithuluzi lokuthuthukisa ukusebenza kwekhompyutha nokulungisa izimbungulu ohlelweni. Isoftware ikuvumela ukuthi wenze i-scan ejulile futhi ulungise izinkinga ezahlukahlukene.
I-Glary Utility – iqoqo lamathuluzi wokuhlanza nokwandisa uhlelo olusebenzayo. Isoftware ikuvumela ukuthi uphathe uhlelo futhi ususe amafayela angenasidingo.